Ingaba i-injini yomoya enze njani umbane?
Umoya ujikajikana ngamaphiko ngeenxa zonke; oku eluphendula isikhondo, edityaniswe generator. Umenzi wenkunkuma amandla ombane ukusuka amandla.
Yintoni ubungakanani turbine ngumoya Kufuneka ntoni na?
Oku kuxhomekeke kwimfuno yakho yamandla. Nceda ukubala ukusebenzisa kwakho max zombane ngosuku. Kwi-avareji, ikhaya eqhelekileyo American kwakuya kufuna injini encinane 5kw okanye 10kw turbine.
Yintoni na ixesha payback avareji?
Ubude bexesha payback ixhomekeke kwi-injini, umgangatho umoya kwindawo yofakelo, rates umbane okhoyo, kwaye imali ekhoyo kunye incentives. Kuxhomekeka ezi kunye nezinye izinto, kwa nexesha elithathwayo ukuze angachacha ngokupheleleyo ixabiso ophephela komoya encinane ingathatha naphi na kwiminyaka emi-6 ukuya kwi-30.
kugcinwa njani ziziinkqubo umoya ezincinane?
Uhlolo kwesiqhelo eyenziwa rhoqo emva kweminyaka embalwa a ophephela-20 + engu- sempilo. A Umfaki professional okanye ngcaphephe abaqeqeshiweyo (idla kumenzi okanye umthengisi kwabathengisa injini) ugcina injini nenqaba ngokusebenzisa uhlolo emzimbeni, nangona ezinye turbines nga esweni kude esuka kwikhompyutha ekhaya.
Ngaba kufuneka uceba imvume?
Ufakelo Energy Wind Small kungafuna imvume ucwangciso kwaye kufuneka udibane igunya lendawo. Lilonke, imigaqo-nkqubo yocwangciso yesizwe ukuxhasa uphuhliso ukuziphilisa Wind Energy.
Ingaba ophephela ezinengxolo?
Ngomoya wethu Small zenzelwe ukuba cwaka kakhulu, umzekelo ngokuthi kwenziwe iinkqubo drive ngqo ukuphepha gear ibhokisi nengxolo zokuphucula ucikizeko lomsebenzi. Ngokubanzi, umoya ngokwawo yenza ingxolo ngaphezu kokuba ophephela komoya. Kubaluleke kakhulu kungenakwenzeka ukuba nayiphi na ingxolo evela Small ngomoya ziya kuba saviwa ngaphezulu kwe-30 m. Ingxolo nosentsimini malunga 40-50 dB (A).
kusekela 7.What uhlobo ngaba ukubonelela on-site ufakelo?
Ngaphambi kokufakwa, siza kunika wonke manual yobugcisa. Okwa ti ungathumela ezintanjeni ukuba liliso ufakelo.
I 8.How Ungakhetha indlela efanelekileyo?
Ukuba iprojekthi yakho kude ukusuka kuthungelwano igridi yoluntu, ngoko ke usenokufunda ukucima indlela grid.
Ukuba nje unethemba ukunciphisa iireyithi zombane, ngoko unga ingqalelo kwindlela kwigridi.
Ngaphandle kwabo, singakwazi ukubonelela isikhululo igridi / zothungelwano micro ngumoya inkqubo gqith solar ngokweemeko ezahlukeneyo.
9.Maybe Ndiyakwazi ukuthenga nje ezinye izakhi ezifana blade, inverter, nenqaba?
Ewe Unga. Nayiphi na iprojekthi ezinxulumene, welcome wabelane nathi.
Ngaphandle imveliso, yintoni enye onokuyenza?
Asikwazi inoxanduva lokuyila, uhlalutyo, ukubala, ufakelo kunye nenkonzo.